အနုပညာသမား ဆိုတော့ လူမချမ်းသာပေမယ့် အလှူအတန်းတွေ လုပ်နေရလို့ စိတ်တော့ ချမ်းသာတယ် ဆိုတဲ့ ခင်သဇင် – Cele Posts
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ခင်သဇင် ကတော့ သူမရဲ့ နေအိမ်မှာ ဘုန်းကြီးပင့် နေ့ဆွမ်း အလှူ ကပ်၍ တရားနာယူ ကုသိုလ်ယူခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် ။ သူမဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ အတိုင်း လိုက်လုပ်ပေးခဲ့ ကြတဲ့ အဒေါ် နဲ့ အမတွေကို အထူးကျေးဇူးတင် ရှိသလို အခုလို လှူရတဲ့အကျိုးအတွက် စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်းကတော့ အတိုင်း မသိပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ် ။
အိမ်လေးက ကျဉ်းတော့ အခုလို ဘုန်းကြီး ပင့်ဖိတ်ဖို့ အမြဲ တွန့်ဆုတ်နေ ခဲ့မိတယ်.. ဒါပေမယ့် အရှင်ဘုရား ကိုတော့ စကားလေး တစ်ခွန်း လျှောက်မိပါတယ်. တပည့်တော် ကိုယ်တိုင် ဦးစီးပြီး အိမ်မှာ သံဃာတော် ပင့်ဖိတ်ပြီး နေ့ဆွမ်းကပ်တာ ဒါဟာ ဘဝမှာ ဒုတိယ အကြိမ်မြောက်ပါ ဘုရားလို့..အမှားပါခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ..တပည့်တော်မက အနုပညာသမား ဆိုတော့ လူတော့ မချမ်းသာပါဘူး ဘုရား..ဒါပေမယ့် ကိုယ်ချစ်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေရ လို့တော့ စိတ်တော့ အင်မတန်ချမ်းသာ ရပါတယ် ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ သူမရဲ့အလှူလေး အတွက် ကြည်နူးမှုလေးကို ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေး လာခဲ့ ပါတယ် ။
အရှင်ဘုရားရဲ့ အားပေး စကားလေးပြန်ကြားရတော့ ရင်ထဲမှာ အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာကြည်နူးရပြန် ပါတယ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ ..။ ခင်သဇင်ကတော့ သူမရဲ့ အလှူပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေ သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ဖို့ အတွက် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ တဆင့် အလှူပုံရိပ်လေး တွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးထား ပါသေးတယ် ။ စိန်ခင်လေးရဲ့ အလှူကို ပရိသတ် တွေလည်း သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ဖို့အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်နော် ။
အနုပညာသမား ဆိုတော့ လူမခမျြးသာပမေယျ့ အလှူအတနျးတှေ လုပျနရေလို့ စိတျတော့ ခမျြးသာတယျ ဆိုတဲ့ ခငျသဇငျ
ပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး ခငျသဇငျ ကတော့ သူမရဲ့ နအေိမျမှာ ဘုနျးကွီးပငျ့ နဆှေ့မျး အလှူ ကပျ၍ တရားနာယူ ကုသိုလျယူခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ ။ သူမဖွဈခငျြတဲ့ ဆန်ဒတှေ အတိုငျး လိုကျလုပျပေးခဲ့ ကွတဲ့ အဒျေါ နဲ့ အမတှကေို အထူးကြေးဇူးတငျ ရှိသလို အခုလို လှူရတဲ့အကြိုးအတှကျ စိတျ၏ ခမျြးသာခွငျးကတော့ အတိုငျး မသိပါဘူးလို့ ဆိုပါတယျ ။
အိမျလေးက ကဉျြးတော့ အခုလို ဘုနျးကွီး ပငျ့ဖိတျဖို့ အမွဲ တှနျ့ဆုတျနေ ခဲ့မိတယျ.. ဒါပမေယျ့ အရှငျဘုရား ကိုတော့ စကားလေး တဈခှနျး လြှောကျမိပါတယျ. တပညျ့တျော ကိုယျတိုငျ ဦးစီးပွီး အိမျမှာ သံဃာတျော ပငျ့ဖိတျပွီး နဆှေ့မျးကပျတာ ဒါဟာ ဘဝမှာ ဒုတိယ အကွိမျမွောကျပါ ဘုရားလို့..အမှားပါခဲ့ရငျ ခှငျ့လှတျတျောမူပါ..တပညျ့တျောမက အနုပညာသမား ဆိုတော့ လူတော့ မခမျြးသာပါဘူး ဘုရား..ဒါပမေယျ့ ကိုယျခဈြတဲ့ အလုပျကို လုပျနရေ လို့တော့ စိတျတော့ အငျမတနျခမျြးသာ ရပါတယျ ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ သူမရဲ့အလှူလေး အတှကျ ကွညျနူးမှုလေးကို ပရိသတျတှကေို မြှဝပေေး လာခဲ့ ပါတယျ ။
အရှငျဘုရားရဲ့ အားပေး စကားလေးပွနျကွားရတော့ ရငျထဲမှာ အတိုငျးမသိ ဝမျးသာကွညျနူးရပွနျ ပါတယျတဲ့ ပရိသတျကွီးရေ ..။ ခငျသဇငျကတော့ သူမရဲ့ အလှူပုံရိပျလေးတှကေို ပရိသတျတှေ သာဓုချေါဆိုနိုငျဖို့ အတှကျ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနေ တဆငျ့ အလှူပုံရိပျလေး တှကေို ပွနျလညျမြှဝပေေးထား ပါသေးတယျ ။ စိနျခငျလေးရဲ့ အလှူကို ပရိသတျ တှလေညျး သာဓုချေါဆိုနိုငျဖို့အတှကျ ပွနျလညျမြှဝပေေး လိုကျပါတယျနျော ။